Kenya oo war kasoo saartay haddii ay la baxeyso ciidanka ka jooga gudaha Somalia - Caasimada Online
Home Warar Kenya oo war kasoo saartay haddii ay la baxeyso ciidanka ka jooga...
Kenya oo war kasoo saartay haddii ay la baxeyso ciidanka ka jooga gudaha Somalia
Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa ka hadashay hadal hayn maalmihii dambe taagneyd, taasi oo la xiriirtay ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee qeybta ka ah howl-galka Midowga Afrika ee AMISOM.
Wasiirka difaaca dalka Kenya, Monica Juma ayaa sheegtay in xukuumadeedu aysan laheyn go’aan ka gaarida inay la baxaan ciidamadooda ka jooga Soomaaliya, balse ay arrintaasi ku dhici karto heshiis la wada-gaaro, sida ay hadalka u dhigtay.
“In Ciidamada Kenya ka baxaan Soomaaliya xilligaan ma go’aamin karno waa in uu ka yimaadaa Midowga Afrika, mana ahan mid quseeya xiriirka xumaaday ee labada dale e Soomaaliya iyo Kenya,” ayey tiri Monica Juma.
Waxay carabka ku adkeysay in arrinta la bixida ciidamada aysan marnaba quseyn xiriirka sii xumaaday ee labada dal, kaasi oo keenay in dowladda federaalka ay xiriirka diblumaasiyadeed u jarto xukuumadda Nairobi, oo ay ku eedeysay faro-gelin ka dhan ah arrimaha gudaha dalka.
Munica ayaa sidoo kale waxay warbaahinta u sheegtay in go’aanka kama dambeysta ah ee ciidamada Kenya looga saarayo Soomaaliya ay waajib tahay inay qaraar ku ansixiso Qaramada Midoobay.
Ciidamada Kenya ee jooga gudaha Soomaaliya ayaa tiradooda lagu qiyaasa ku dhawaad saddex kun oo Askari, kuwaasi oo qeyb ka ah la dagaalanka argagixisada, waxayna inta badan weeraro kala kulmaan kooxda Al-Shabaab.
Si kastaba, hadalkan ayaa imanay xili uu sii xumaaday xiriirka labada dal, taasi oo keentay hadal hayn ku aadan in Kenya ay ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya, kadib markii dowladda federaalka ay ceyrisay safiirkeedii, isla markaana u jartay xiriirkii diblumaasiyadeed.